FITAKIANA NY NOSY MALAGASY : Miantso ny Malagasy tsy hozarazarain’ ny hevitra politika ny Filoha Rajoelina
Firaisan-kina mafy orina no takina amin’ny vahoaka malagasy tsy an-kanavaka mba hamerenana ny fitantanana ny Nosy Malagasy amin’i Madagasikara. Manao antso avo ny Filoha mba tsy hozarazarain’ny hevitra politika tsy mitovy intsony ny rehetra fa hiara-hifantoka ho an’ny tanindrazana. 18 novembre 2019
Finiavana lehibe no nananan’ny Filoha Andry Rajoelina. Ny tenany no sahy nitsangana hitaky ny Nosy Malagasy izay nogiazan’ny Frantsay nandritra ny taona maro. Hatramin’ny nahazoan’i Madagasikara fahaleovan-tena, taty amin’ny taona 2019 vao nisy Filohan’ ny Repoblika nijoro, ka mitarika ny fitakiana ireo Nosy Malagasy mba haverina amin’i Madagasikara. “Ireo nosy Malagasy ireo dia tsy nosin’ny Filoha irery fa nosintsika Malagasy iray manontolo”, hoy ny Filoha Andry Rajoelina. Nambarany fa fotoana tokony hampitoviana ny fomba fijery izao.
Rehefa tombontsoa ho an’ny tanindrazana no resahina dia tokony tsy hisy intsony ny fizarazarana noho ny loko sy ny hevitra politika tsy mitovy. “Fantatrareo tsara fa ny hevitra ara-politikan’ ny Profesora Raymond Ranjeva tsy dia mitovy hevitra amiko, fa rehefa Malagasy no resahina dia mila miray ary mila mitambatra isika rehetra. Najanona any ny hevitra tsy mitovy, ny disadisa politika fa mila miray saina sy miray fo dia ho tafita i Madagasikara ”, hoy ny Filoha. Nanentana ny vahoaka tsy ankanavaka ny Filoha haneho ny firaisan-kina mba hahazoan’i Madagasikara ny fitantanana an’ireo Nosy Malagasy.
“Ilaina ny firaisan-tsaina, ilaina ny firaisam-po. Rehefa miaraka isika rehetra dia ho tody any amin’izany tanjona irintsika izany. Hitantsika fa ny mandrafitra ny Kaomisiona na ny Delegasionina izay hitaky sy hijery ny fomba hijerena ireo Nosy Malagasy dia hitanareo tsara fa nampiray ny Malagasy aho ”, hoy hatrany ny Filoha Andry Rajoelina, omaly. Notsindriany mazava fa izy mpitarika, ary ny vahoaka no miara-dia sy manohana azy ao aoriana. “Mitari-dalana aho izao. Izaho irery mandeha haingana fa isika rehetra no lasa lavitra”, hoy izy.
Mafonja ny delegasionina tarihin’ny Praiminisitra
Ny alatsinainy ho avy izao no fantatra fa hihaona mivantana eny amin’ny lapan’Andafiavaratra ny solontenan’ ny firenena Frantsay sy ireo delegasionina Malagasy izay tarihin’ny Praiminisitra, Ntsay Christian. Nitondra fanazavana ihany koa ity farany, omaly, izay nilazany fa ho tohin’ ny fanapahan-kevitra noraisin’ ny Filoham-pirenena roa tonta, ny Filoha Andry Rajoelina sy ny Filoha Frantsay ny fiaraha-midinika izay hatao eny amin’ ny Lapan’ Andafiavaratra io. “ Tamin’ ny volana mey no voalaza fa hananganana io fivoriana iarahan’ ny firenena roa tonta mandinika ny ho avin’ ireo Nosy Malagasy miisa efatra ireo. Miditra amin’ ny fanatanterahana izay fanapahan-kevitra izay isika. Misy ny delegasionina Malagasy izay tarihiko ”, hoy ny fanazavany.
Tsy mbola fantatra mazava kosa izay Delegasionina Frantsay ho avy eto amintsika. Voalazan’ ny Praiminisitra fa rehefa fantatra ny anaran’ ireo Delegasionina dia hampahafantarina amin’ ny vahoaka Malagasy ihany. Irariana, hoy izy, ny hiverenan’ ireo Nosy Malagasy miisa efatra ho eo am-pelatanan’ ny Malagasy mba ho reharehan’ i Madagasikara. Marihina fa efa nisy ny fanapahan-kevitra noraisin’ny Firenena mikambana tamin’ny taona 1979, fa an’ i Madagasikara madiodio ireo Nosy miisa efatra. Taorian’ io, tsy nandrenesam-peo intsony ny fitakiana an’ireo Nosy Malagasy raha tsy amin’izao fotoana izao indray.
Vehivavy iray sy ny zanany norasarasain’ny jiolahy tamin’ny antsy BESALAMPY (225) 8 juillet 2020 Hofehezina ny fidirana an’Ambanja, vavahadin’i Diana sy Sava FIATREHANA NY COVID -19 (212) 8 juillet 2020 210 ireo voa tamin’ireo 578 natao fitiliana FIVOARAN’NY “COVID-19” ETO ANALAMANGA (171) 8 juillet 2020 Miverina amin’ny fihibohana tanteraka Analamanga, miato avokoa ny fampianarana COVID-19 (137) 8 juillet 2020 Naato ny sampan-draharaha sasany noho ny covid-19 FODIANA AN-TANINDRAZANA (133) 8 juillet 2020 Nahatratra mpijibika dingadingana nampiasa fitaovana voarara MPANARA-MASO NY JONO AO NOSY BE (131) 8 juillet 2020